ယိုတိပ်သည်အထွက်နှုန်းနှင့်ရေအသုံးပြုမှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးရေနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာကိုသင်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်နေရာချခြင်းဖြင့်သီးနှံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သင်၏ system ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါတိကျသောနေရာချထားမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မတိုးဘဲ ၁၀ မှ ၆၀ စင်တီမီတာမှထုတ်လွှတ်သောအကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်လျှောက်လွှာအတွက်အမျိုးမျိုးသောရရှိနိုင်သည့်စီးဆင်းမှုနှုန်းများ၊ နံရံအထူနှင့်အတွင်းပိုင်းအချင်းများဖြင့်အကောင်းဆုံးသောတိပ်ကိုရှာဖွေပါ။
လျှောက်လွှာ အထွေထွေ, စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း
အသုံးပြုမှု - ရေချွေတာရေးဆည်မြောင်းစနစ်
ဆိပ်ကမ်း Tianjin, တရုတ်
၁။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၄ နာရီ၊ ၁၄ နာရီအတွင်းအမြန်၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။
2. စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ in တွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်။
၄။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အဖွဲ့၊ စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။
6. OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှု။
7. Mass အမိန့်မတိုင်မီနမူနာအမိန့်ကိုလက်ခံပါ။
ရှေ့သို့ Big Gun Sprinklers
နောက်တစ်ခု: Neo ကို PC လှိုင်းလေထန် dripper
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်နှစ်ကျော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသောကမ္ဘာပေါ်ရှိဆည်မြောင်းစနစ်ကိုလူသိများသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
2. သင် OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းပါသလား
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် GreenPlains အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုအတူတူပင်အရည်အသွေးနှင့်အတူကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည် ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်ကုန်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါမည်။
၃။ မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင် MOQ ကွဲပြားခြားနားသည်
Langfang, HEBEI, China တွင်တည်ရှိသည်။ Tianjin မှကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ကားဖြင့် ၂ နာရီကြာသည်။